Fanavaozana ofisialy ny Nosy Cayman: Ampirisihina mafy momba ny COVID-19
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Fanavaozana ofisialy ny Nosy Cayman: Ampirisihina mafy momba ny COVID-19
Rehefa nanome ny mpitarika ny nosy a Fanavaozana ofisialy ny Nosy Cayman, nilaza izy ireo fa "nampahery fatratra" ny farany COVID-19 coronavirus valiny - tamin'ny fitsapana 154 dia nisy zava-tsoa 4 tamin'ny 2 tamin'ireo valiny tsara indrindra 4 noho ny fifandraisana tamin'ny tranga teo aloha.
Tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety fanavaozana ofisialy COVID-24 Cayman Islands tamin'ny zoma 2020 aprily 19 dia nilaza izy ireo fa namporisihina izy ireo fa toa mandeha ny fepetra henjana napetraky ny governemanta. Miaraka amin'ny fanandramana misimisy izay mandeha, ny valiny manaraka ao anatin'ny 10 andro ho avy dia hampahafantatra sy hamolavola ny valim-panohizan'ny governemanta manoloana ny krizy.
Ny vavaka isan'andro dia notarihin'i Pasteur Chris Mason avy amin'ny Fikambanana Pastora.
Amin'ireo fitsapana 154 notontosaina tamin'ny santionany azo hatramin'ny 21 aprily, efatra no voasedra tsara. Ny roa amin'izy ireo dia misy ifandraisany amin'ny tranga tsara taloha ary ny roa kosa dia nahazo ny fiarahamonina.
Amin'ireo zavatra tsara 70 ankehitriny, 33 no simptetika, 22 asymptomatika; Olona 6 no ao amin'ny hopitaly - efatra ao amin'ny Health Services Authority, ary 8 no sitrana.
Niala tsiny ny Dr. Lee noho ny valiny mbola tsy natao ho an'ireo izay niverina tamin'ny sidina British Airways 15 andro lasa izay ary nisaotra azy ireo noho ny faharetany; andrasana anio ireo valiny ireo.
Nanomboka nosedraina izao ny hopitaly dokotera.
Ny vondrona toy ny mpiasan'ny fitsaboana voalohany rehetra, ny mponina ao am-ponja ary ny beantitra amin'ny trano fikarakarana dia anisan'ireo hosedraina amin'ny dingana voalohany amin'ny programa fitiliana nitarina. Ny dingana faharoa dia ho lehibe kokoa ary hametrahana ny olona miasa sy miatrika ny vahoaka isan'andro toy ny supermarket, tobin-dasantsy, banky ary mpiasa sosialy ary koa ny polisy. Hanomboka tsy ho ela izany, mandritra izany fotoana izany dia hitsapa ny olona rehetra ao amin'ny Little Cayman. Dingana fahatelo dia ho lehibe kokoa amin'ny sehatra rehetra ary mety hanana endrika programa fanandramana santionany izay hanampy amin'ny famaritana ireo vondrona afaka avela hiverina hiasa.
Cayman dia mbola eo amin'ny sehatra famoretana valin'ny COVID-19.
Ny zaza ao anatin'izany ny zazakely dia voasedra amin'ny fomba mitovy amin'ny olon-dehibe.
Nanao tatitra ny praiminisitra momba ny fahombiazan'ny fanitsiana maro ny lalàna izay hanome hery ny Governemanta hamaly amin'ny fomba mahomby kokoa ny vokadratsin'ny krizy COVID-19 amin'ny lafiny sosialy sy toekarena.
Ny fanitsiana dia ny The National Pensions, Customs and Border Control, Labor, Immigration (Transition) ary ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana.
Taorian'ny valim-panadinana nampandrenesina nambara androany, raha «mitohy manara-penitra ny valiny ankehitriny, ny governemanta dia afaka mijery ny mety hanalefahana ireo fameperana napetraka, indrindra ny momba an'i Cayman Brac sy Little Cayman izay nisy valiny tena tsara ary fitsapana tsara iray ihany. ”
Hakatona avokoa ireo andrim-pampianarana rehetra amin'izao taom-pianarana izao.
Satria mbola manan-kery ny taom-pianarana, ny sekoly rehetra (andrim-panabeazana tsy maintsy atao) dia andrasana hanohy fianarana lavitra.
Nidera sy nisaotra ny CUC izy tamin'ny fakana ny takelaka nividianan'ireo zokiolona rehetra tao amin'ny magazay lehibe roa tamin'ny 7-8 maraina andro iray tamin'ny herinandro lasa teo ary ny fikasan'izy ireo hanao izany amin'ny herinandro ambony any amin'ny supermarket iray hafa.
Ny hetsiky ny governemanta toy ny famatsiam-bola fisotroan-dronono omena ho an'ny mpiasa sy ny fanentanana $ 15 tapitrisa hanampiana ireo orinasa kely dia nanangana fanantenana hitazonana ny orinasa.
Tsy zakan'ny governemanta ny manome karama ara-bola ho an'izay rehetra iharan'ny fatiantoka asa na ny fampiatoana asa.
Raha vantany vao lasa lalàna ny fanitsiana ny fisotroan-dronono, ny fialantsasatra fisotroan-dronono manomboka amin'ny 1 aprily dia midika fa ny mpampiasa sy ny mpiasa dia tsy mila mandray anjara amin'ny fisotroan-dronono manomboka ny volana Mey handroso mandritra ny enim-bolana. Na izany aza, raha maniry ny sasany dia afaka manao izany an-tsitrapo izy ireo, midika izany fa tsy misy olona (mpampiasa na mpiasa) voatery terena handoa ny vola aloa amin'ny fisotroan-drononon'izy ireo mandritra io fotoana io.
Ny governora dia "namporisika mafy" ny valim-panadinana androany, nanamarika fa niasa ny fameperana ary nanolotra fanantenana.
Nisy fitaovam-panadinana fanampiny ary tonga ny maro kokoa ka natoky ny manam-pahefana fa manana swab sy kitapo fitrandrahana ampy hanaovana fitiliana bebe kokoa izy ireo.
Ny sidina fampodiana faharoa any Miami dia nokarakaraina tamin'ny 1 Mey satria ny sidina voalohany dia namidy haingana be.
Ny biraony koa dia miara-miasa amin'ny Governemanta Meksika hametraka sidina mankany Cancun, Mexico amin'ny herinandro ambony mba hanamorana ny famindra ireo Meksikana eto. Ny olona liana dia tokony hisoratra anarana amin'ny [email voaaro]
Ary koa, amin'ny alàlan'ny airbridge UK izay mampiasa British Airways, olona 57 no hiverina ho any amin'ny nosy Cayman amin'ny sidina amin'ny herinandro ho avy izay hitondra kitapo sy swabs tena ilaina koa ary ekipa fiarovana UK.
Ireo 57 tafaverina dia samy hitoka-monina amin'ny toerana tantanan'ny governemanta.
Ireo izay te hiverina any UK amin'ny diany miverina amin'ny sidina dia avela hitondra valizy roa, milanja 23 kg ny tsirairay, fa tsy kitapo iray.
Namboarina ny endrika fitsangatsanganana an-tserasera vaovao ary hambara amin'ny alàlan'ny lahatsoratry ny media sosialy ny governora.
Tsy tokony hifandray ireo olona manana olana momba ny fahazoan-dàlana [email voaaro] fa tokony hifandray amin'i WORC.
Ny governora dia nanao antsoantso ho an'ny mpisolovava, ny mpisolovava ary ny ekipan'ny Drafting ara-dalàna ho an'ny asan'izy ireo.
Ny Minisitra Seymour dia nanao antsoantso ho an'ny indostrian'ny fiantohana ara-pahasalamana noho ny asa fanompoana sy fiaraha-miasa matotra ataon'izy ireo amin'ireo orinasam-panjakana amin'ny fiatrehana ireo olan'ny fiantohana ara-pahasalamana nateraky ny krizy pandemika.
Mandritra io krizy ara-pahasalamana io dia zava-dehibe ny fandoavana ny vidin'ny fiantohana sy ny toetr'andro.
Family Clinic Clinic dia manohy manao asa lehibe mandritra ny asany isan'andro ao amin'ny HSA.
St. Kitts sy Nevis Curfews: Manitatra ny ora tsy maharitra 24 ora sy voafetra ny governemanta
Hotahian'Andriamanitra ny Repoblika Federalin'i Nizeria: Lahateny ho an'ny filoham-pirenena momba ny COVID-19